Qalab sawir qaade ah: Qalab noocee ah ayaan ubaahanahay? (II) | Abuurista khadka tooska ah
Qalab sawir qaade ah: Qalab noocee ah ayaan ubaahanahay? (II)
Fran Marin | | Sawir, General
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka tirsan kooxdayada sawir qaadista xirfadleyda ah ayaa ah isha iftiinka in aan isticmaalno iyo aaladahaas oo dhan oo xoojin kara isla markaana buuxin kara saameynta ilaha iftiinka. Qaybta labaad ee maqaalkeenna taxanaha ah ee ku saabsan qalabka sawirrada xirfadeed waxaannu ku samaynaynaa jeexitaan qaar ka mid ah aaladaha lagu taliyey si loo gaaro natiijooyinka ugu wanaagsan.
Xusuusnow inaad marin ka heli karto qaybta hore ee taxanaha maqaalada aquí.
Laydhka: Muhiim ayey u tahay shaqo kasta oo sawir qaadis ah
Waxaan dooran karnaa laba nooc oo ah ilaha iftiinka macmalka ah. Dhinac waxaan ka helnaa fallahayaal iyo dhinaca kale oo leh nalalka tooska ah (ama iftiinka joogtada ah). Mid kasta oo ka mid ah beddelaadyadu waxay leeyihiin sifooyin kala duwan iyo sababo loo adeegsanayo. In kasta oo tooshku loogu talagalay in lagu iftiimiyo aagagga waaweyn ee walxaha isla markaana leh qaab dhismeed hufan oo dabiici ah (badiyaa wuxuu leeyahay awood aad u sarreeya), iftiin joogto ah ayaa loo isticmaalaa in lagu soo qabto walxo yar yar ama aad u siman.
Sawir qaade: Iftiinku waa shey muhiim ah oo ay tahay inaan marwalba tixgalino marka la sameynayo sawirada sawirada. Xaaladda ku shaqeynta flash-ka, waxaa aad loogu talinayaa in aan isticmaalno qalabka wax lagu dhejiyo. Maskaxda ku hay in aaladdan ay kuu sahlanaan doonto inaad ku cabirto xoogga iftiinka. Haddii aad ku shaqeyso isha iftiinka joogtada ah (guluubyada si joogto ah u sii jiraya) waxaad awoodi doontaa inaad si fiican ula shaqeyso qalabka wax lagu sawiro ee kamaraddaada ay isku dhafan tahay, in kasta oo halkaan uu yahay muuqaalka ama shaashadda kamaradeena iyo dabcan taariikhiga ah ee sawirrada illaa iyo waxay na siin doontaa macluumaad aad u habboon oo ku saabsan xuduudaha sida ugu muhiimsan ee soo-gaadhista.
Weli miiska nolosha: Waxaa lagugula talinayaa inaad mid hesho haddii aad naftaada u hibeyn doonto gebi ahaanba iyo xirfad ahaanba adduunka sawir qaadista. Waxaad leedahay laba wado oo aad kuheli karto istuudiyaha sawir yar si aad nolol ugu siiso noloshaada wali, mid ayaa iibsanaya mid kalena abuurayo. Ka soo horjeedka waxa ay u muuqan karto, iyo gaar ahaan haddii aan ku soo galayno adduunka sawir-qaadista, waxaa lagugula talinayaa inaan dhisno miiskeenna nolosha. Haddii aad shabakadda ka dhex gasho waxaad heleysaa dhowr hab oo aad ku abuuri karto mid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Qalab sawir qaade ah: Qalab noocee ah ayaan ubaahanahay? (II)
Casharka Fiidiyowga: Loomax / Hollywood Saamaynta Lightroom
Baro qalabka qalinka adoo ciyaaraya Cayaarta Belzier